Taariikhda My Butros » Sida loo hadal Dirty in xiriir
Last updated: Jul. 07 2020 | 2 min akhri
Waxaan leenahay dhan lamaane arkay hadli wasakh ah ee movies, TV iyo xitaa ku akhri buugag laakiin uusan xitaa shaqeeyaan? Iyo ka sii muhiimsan, waa in aad soo bandhigo hadal wasakh xiriirkiina galay?
Hase yeshe, Dadku waxay aaminsan yihiin, marka laga hadlayo wasakh ah ma aha in aad wax sheegto cajiib ama ka jiraan si ay u helaan saamayn la doonayo. By ka dib talooyin ka hooseeya, waxaad ku dari kartaa Yeel in aad xiriir galmo iyo nolosha iyadoo weli aad.
Ku darista Spice: Sida dhir udgoon dar dhadhan si karinta, hadal wasakh ah ku darayaa dhadhan in xiriirka. Si kastaba ha ahaatee, ma waxaad u baahan tahay inaad taxaddar sida aad u badan hadal wasaq, sida uunsigii ay aad u badan, heli doontaa caajis iyo xitaa Fasaadiyaan kartaa xiriirka. Si aad ku dari farxad iyo madadaalo, isku day in aad sida in la dheeli u isticmaalaya waxa ay noqon doontaa mid xiiso leh oo lama filaan ah mar kasta oo aad samayn hadli wasakh ah in qofka aad isqabtaan.
Joog raaxo: Caaradda ugu muhiimsan waa inaan sameeyo iyo inaad sheegto waxa aad ku raaxaysato. Haddii ay cad ama khiyaano, haddii aad tahay mid aad u raaxo markaas oo sheegay in ay u badan tahay waxaa aad u dhawaaqi doonaa habacsanaanta. Iyo in ay si fiican u daacad ah, waxaa jira dhowr waxyaalood oo ka xun hadal wasakh sirgaxan.
Noqo wax Oge: Cad, wiswis, sexy, iyo hadal wasakh graphic waa weyn ee qolka hurdada sida ay u horseedi kartaa galmo dareen. Laakiin haddii aad u maldahan, marka laga hadlayo wasaq, waxaad ka heli doontaa in ay abuuri doonaa saameyn doonayo xoog sida abuurto xiisad galmada marka lagu daro samaynta lamaanahaaga si joogto ah u malaynayso inaad ku saabsan. In aad u maldahan, dhab ahaantii, run ahaantii noqon karaa mid awood leh oo ka badan cad marka laga hadlayo wasaq.
Arrin kale oo muhiim ah oo ku saabsan hadal wasakh khiyaano waa in aad kaliya ku saabsan meel kasta oo ay u qaban karaan. From xisbi u soo laallaada la saaxiibo in ay noqoto shaqada, fudud ah “Waxaan jeclaan lahaa kuwaas oo dadka kale aysan ku wareegsanaa sida waxyaabo xiiso leh qaar ka mid ah hay in aan doonayo in aan sameeyo oo aan idiin soo qabto”, ka tagi doono lamaanahaaga yaabeen oo ku saabsan waxa ay dhab aadan maskaxda ku hayso.
Cad, qol hadal: Iyadoo tip tani waa soo horjeeda saxda ah ee kor ku xusan, hadal wasakh graphic dhigi doonaa ka kulul galmada, ka xiiso badan, iyo sii daran – dhab ahaan waxa qof kasta oo doonayo in qolka hurdada. Ha u ogolaan hadalka aad wadid ku cad ka fog tan cayaar ah, qol hadal sexy. Si fudud u geli laheyd in la joogo oo sheegaysa waxa aad dareento sida “aad dareento in gudaha si wanaagsan ii ah”, ma ahan oo keliya noqon doonaa lamaanahaaga on laakiin duugis qadyaan sidoo. Haddii aad weli dareento isku buuq ama sirgaxan, ka awood badan “Heedhe”, “haa”, iyo “oh ilaah” sidoo kale waxay bixiyaan saameyn la mid ah.
Erotica: Malaha caaradda ugu sahlan waa in aad akhrido erotica ama hindiga tixaha. Ma aha oo kaliya in ay fidin doonaa Deraadeed hadal wasakh laakiin ku siin doonaa fekrado badan ee xaaladaha, Doorka play, iyo khadadka ee intaa dheer in aad ka tago jeestay, gaar ahaan markii aad ku dhameysan akhriska goobta ka uumi bixiya.
Haddii aad ku jirtay aad lammaanahaaga muddo dhawr bilood ama toban sano, hadalka wasakh hindisi karaa oo Dhectuuro, isagoo intaa ku daray heer cusub in aad xiriir.